Nepali Rajneeti | भागरथी’को न्या ’यको ला’गि रवि लामिछानेको टिम बैतडीमा !: सलाम छ रविलाई
भागरथी’को न्या ’यको ला’गि रवि लामिछानेको टिम बैतडीमा !: सलाम छ रविलाई
माघ २६, २०७७ सोमबार ४९० पटक हेरिएको
१७ वर्षीया बालिका भागरथी भट्ट को न्या’यको आ’बाज उ’ठाउन’को लागि पत्रकार रबी लामिछाने बैतडी प्रस्थान गरेका छन ।
भा’गरथी को न्या’य को नि म्ति उ’ठिरहेका आ वा’जहरुला’ई थप ब’ल मि’ल्छ कि भन्दै बैतडी तर्फ जान लागेको उनले फेसबुकमा जानकारी गराएका छन ।
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ को चडेपानीमा त्यस्तै घटना भएको छ । अहिले पुरै गाउँ शोकमा डुवेको छ ।
गाउँकी होनहार किशोरी भागरथी माथि भएको घटनाले गाउँलेका आँखाबाट पनि अविरल आँसु बगिरहेका छन। उनीहरुका आँसु रोकिएका छैनन्।
भागरथीले सबैलाई चटक्कै छोडेर गएको पत्यार लागिरहेको छैन। तर लवलेक सामुदायिक वनको बनमाराको झा डी मा भगीरथीको शव फेला परेको थियो ।
उनको शवको प्रकृति हेर्दा पनि निर्मला पन्तकै जस्तो घटना भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ । उनको कपडा च्या ति ए का छन् भने श रि र मा पनि डा म देखिएका छन् ।
सुगरका बिरामी श्रीमानलाई गुमाएपछि साहारा बनेकी छोरी सदा सदाका लागि छोडेर गएपछि उनलाई बोलाउँदै घरी–घरी भक्कानिन्छिन्।
वुवाको निधन पछि परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी थपिएपछि उनका छोरा भर्खर भारत कमाउन गएका थिए । बहिनीको घटना थाहा पाएपछि उनी पनि फर्कदै छन् ।
गाउँका अरु महिलाहरुले द्रोपतिलाई सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। रोजगारीका सिलसिलामा भारतको दिल्लीमा रहेको जेठो छोरा फर्किरहेको छ।
घर खर्च चलाउन र बहिनीको पढाई खर्च जुटाउन समस्या भएपछि नै कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै उनी भारत पसेका थिए।
बुवाको किरियामा बसेकी आमालाई भागरथीले नै घरको सबै काममा सघाउने गरेकी थिइन्। तर उनको खुसीमाथि कुन पापीले आँखा लगायो ।
भागरथीको ब-ला ‘त्का-र पछि ह’ ‘त्या भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान कार्य गरिरहेपनि न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।